Talefishinka Qaranka oo si cajiib ah u baahinaya haraadiga Al Shabaab (Daawo Muuqaal adaa yaabi doonee) | warsugansomaliya.wordpress.com
Talefishinka Qaranka oo si cajiib ah u baahinaya haraadiga Al Shabaab (Daawo Muuqaal adaa yaabi doonee)
Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed ee Somali National TV (SNTV) oo ah kan loogu daawashada badan yahay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa waxa uu bilaabay baahinta qorshe macquul ah oo dad badan ka yaabsaday.
Halkaan ka Daawo Muuqaalka Soomaalaay dabar gooynta Shabaab yaanan loo kala harin
Tv-ga ayaa si cad oo toos ah u soo bandhigay dhibaatada kooxda Al Shabaab ee lagu leeynayo Ardayda, Waalidiinta , Culumada iyo cid alaale oo Muslim ah.
Muuqaalkaan oo la saaray Muusik tiiraanyo ah waxaa lagu soo bandhigay kooxda Al Shabaab oo ku faaneeysa dad ay laayeen balse Sheekh Caalim ah ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa uu ku wacyi galiyay Aayado Quraan ah oo uu soo daliishay kaas oo sheegay in uu Naarta ku waarayo ruux alle iyo ruxii is dila ee hadane umad kale nafta ka jara.
Arinta ugu yaabka badan ayaa waxa ay tahay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed ee Somali National TV (SNTV) oo shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay soo sheegaan halka ay ku dhuumanayaan haraadiga yar ee Al Shabaab inta aysan qarxin dad masaakiin ah oo waxba galabsan .
← Cali Maxamed Geedi oo ka hadlay sida uu ku dhacay waresyi uu ku fashilmay oo uu siiyay Idaacada Al-Fuqaan.
Qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah Kenya oo jecleyn inay dib ugu noqdaan Dalka Soomaaliya!!(Daawo Muuqaal+Warbixin) →